Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya oo geeriyooday - Awdinle Online
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Carte Qaalib ayaa maanta ku geeriyooday magaalada Hargeysa ee degaannada Soomaaliland, halkaasi oo uu muddo ku xanuunsanaa.
Marxuum Cumar Carte Qaalib ayaa ku geeriyooday cisbitaal gaar ah, sida uu xaqiijiyey duqa magaalada Hargaysa Cabdiraxmaan Maxamuud Soltelco.
Cumar Carte Qaalib ayaa xilal kala duwan kasoo qabtay xukuumaddii hore ee Soomaaliya, isagoo soo ahaa Wasiirka Arrimaha Dbedda horraantii toddobaatameeyada oo ay Soomaaliya ku biirtay ururkii Jaamacadda Carabta.
Cumar Carte waxaa loo magacaabay xilka Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya maalmihii ugu dambeeyey ee xukuumaddii Maxamed Siyaad Barre.
Markaasi ka horna waxa uu ka mid ahaa siyaasiyiin caan ka ah Soomaaliya oo xukuumaddii Maxamed Siyaad Barre ay ku xukuntay dil, inkastoo markii dambe xabsi loogu beddelay kadib markii cadaadis caalami ah uu soo foodsaaray dawladdii milatariga ahayd.
Kadib markii ay dhacday dawladii Maxamed Siyaad Barre ayaa mar kale Madaxweynihii la magacaabay ee Cali Mahdi Maxamed uu isla Cumar Carte mar kale u magacaabay Ra’iisul Wasaare inuu noqdo.
Cumar Carte Qaalib intaas wixii ka dambeeyey waxa uu ka fariistay siyaasadda isagoo inta badan ku sugnaa Somaliland.
Ra’iisul Wasaare kuxigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa tacsiyadeeyay geerida ku yimid Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya.
Inna lillaahi waa inna illayhi Raajicuun.
Waxaan tacsi u dirayaa Qoyska, qaraabada iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday Allahu naxariistee marxuum Cumar Carte Qaalib. Wuxu ahaa Oday guurti ah oo door muuqda kaga jira sooyaalka dalkeenna. Wuxu soo noqday Ra’iisalwasaare sidoo kale Wasiirkii arrimaha dibadda.
Marxuumku tacab badan ayuu gashaday dalkiisa, wuxuuna ka qayb qaatay dib u heshiisiinta dadka, si waddaniyad iyo daacadnimo leh ayuuna shacabka Soomaaliyeed ugu soo shaqeeyay. Waxaan alle uga baryayaa inuu naxariistiisa Janno ka waraabiyo.
Previous articleMahdi Guuleed” Waa laga gudbay xilligii qabiil dadka lagu Owrkacsan jiray” :Jawaab ku socota mucaaradka)
Next articleGuddoomiye ku-xigeennada cusub ee Gobolka Banaadir oo xilalka la wareegay